Ma tihid jinsi, haddase waa maxay? | Martech Zone
Waxaan mar uun helnay qof noo sheega inaan annaga, ama taa beddelkeenna nahay foomka codsiga, ma ahayn "galmo" Dhinacyada qaar waxaan filayaa inuu qofkaasi saxsanaa. Foomamka, iyaga laftoodu maaha kuwo jinsi ah, laakiin dadka iyaga u adeegsada oo ku tiirsan iyaga si ay u ururiyaan xogta, iyagu waa, haddii aan ahayn galmo, waa muhiim nacasnimo.
Marka sidee adiga, ganacsade meherad, suuqleyaal, iwm, oo leh wax soo saar ama adeeg aan “sexy” ahayn uga dhigtaa “mid jinsi ah”? Waa kuwan dhowr dariiqo.
U Sheeg Sheekada Macaamiishaaga: Fursadaha ayaa ah inaad leedahay shirkado xiiso leh oo adeegsanaya adeeggaaga ama sheygaaga. Abuur daraasado kiis. U oggolow macaamiisha inay ku soo dhajiyaan bartaada, oo ay wareysiyo fiidiyoow ah la yeeshaan oo ay ku dhejiyaan shabakadahaaga bulshada. La xiriir barta wax ku qora ee ku yaal boggaaga sheekadooda, guulahooda. Adoo diirada saaraya isticmaalka qabow iyo hal-abuurka ee badeecadaada waxaad ka dhigeysaa mid aan dhamaad laheyn oo xiiso leh oo u fureysa wadooyin cusub oo dadka ay kaga hadlaan ama wax kaa qoraan
Fur Hood: Ma leedahay runtii tiknoolajiyad xiiso leh oo wadaysa ganacsigaaga? Ma abuurtay nidaam gaar ah oo kaa caawinaya ka shaqeynta meheraddaada? Fursadaha ayaa ah in meheraddaadu leedahay wax u gaar ah oo kaxeeya (ama ma guuleysan doontid). Muuji dhinacyada gaarka ah ee ganacsigaaga oo dadka waxaad kaheleysaa daaha gadaashiisa. Waxay u badan tahay inay tani noqon doonto wax macaamiisha iman kara ama xubnaha saxaafadda ka heli doonaan xiiso.
Macaamiishaadu Ha U Idiyaan Dalabkaaga: Tani wax yar ayey ka duwan tahay tii hore. Quruxda shabakadaha bulshada ayaa ah inay macaamiishaada u ogolaato inay kaa hadlaan. AtQalabaynta waxaan la soconaa waxay dadku naga yiraahdaan Twitter. Halkii aan kaliya iskaga ilaalin lahayn dhamaan waxyaabahaas wanaagsan waxaan abuurnay a Labadii Caannimo Waxaan daabacnay oo qaabeynay farriimahaas wanaagsan oo aan ku dhejinnay hoolka xafiiskayaga. Dib ayaan u daabacnay oo waxaan ku dhejinnay qaar ka mid ah tweets-ka darbiga boggeena Facebook iyo baloogga Tani waxay dadka ka dhigtay inay mar kale naga hadlaan waxayna sasabeen qaar ka mid ah dadka qoray faallooyinka asalka ah si dib loogu dhajiyo tweets-ka. Waxay ku abuureysaa farxad ku saabsan astaantaada iyo sheygaaga maxaa yeelay waxay ka imaaneysaa isticmaaleyaasha dhabta ah ee adeeggaaga. Waxay u oggolaanaysaa macaamiishaadu inay kaa hadlaan, oo ay saaxiibadood u sheegaan sida "galmada" aad tahay iyo sababta ay kuu jecel yihiin.
Sababtoo ah inaadan haysan qalabka ugu iftiimaya ama barnaamijka isku xirka bulshada ee ugu caansan internetka micnaheedu maahan in ganacsigaagu uusan xiiso lahayn. Ka yara qoto dusha sare oo arag waxa dadka ku kicin kara inay hadlaan. Fursadaha waa inaadan qod qoto dheer u qodneyn.
Tags: sheeko macmiilxirmosheeko sheegashada
Nov 20, 2009 saacadu markay tahay 6:49 PM
Waxaan u maleynayaa 'Ma ahan Sexy' inay xoogaa calaamad sharaf ah ku leedahay halkan Indiana. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha halkan jooga ayaa sameeya codsiyo aan galmo badan ahayn… laakiin way shaqeeyaan. Way sugan yihiin, way cabbiraan, waxay sameeyaan waxa macaamiisha ay rabaan inay sameeyaan. Sexy waa wax fiican markaad raadineyso taariikh, laakiin tani waa ganacsi!
Nov 20, 2009 saacadu markay tahay 6:23 PM
Waxa kale oo aad ka faa'iideysan kartaa xiisaha qof si dhab ah u arka "jinsi ahaanta" waxa aad sameyneyso. Taasi waxay noqon kartaa macaamil, shaqaale, shuraako warshad, ama qof kale gebi ahaanba.
Waxaan haystay macalin calculus oo si xeel dheer looga reebay sida xisaabta u shaqeysay. Wuxuu ku dhejin lahaa isla'egyo iyo jaantus sabuuradda isla markaana ficil ahaan wuxuu ku xusayaa farxad sida quruxda badan ee ay u ahayd. Wuxuu lahaa dhoola cadeynta cunug subaxnimadii kirismaska. Haddii aad qolka kula jirteen ma caawin kartid laakiin waad arki kartaa xoogaa xarrago ah xiriirka ka dhexeeya lambarrada. Xamaasaddiisu waxay ahayd mid faafa. Wuxuu ka dhigay kalsilo galmo ah.
Nov 20, 2009 saacadu markay tahay 6:51 PM
Clay dhibic fiican oo waan ku raacsanahay. Farxadda, xiisaha, qof ayaa u leh badeecad ama shirkad hubaal waa laga qaadan karaa. Si kastaba ha noqotee, ma hubo inaan waligay arki karo jinsi ahaanta kalkulaaska!